Iiresiphi ezilula-iBezzia | IBezzia
Pheka Kukwayimfuneko kwaye kungumsebenzi ophambili kubomi beentsapho, ukuzonwabisa ngokudlala kwabafazi abaninzi. Zimbalwa izinto ezinomvuzo njengokupheka into uze wonwabe xa uyitya. Inye kuphela into edla ngokuchasene nabasetyhini malunga noku: ixesha.
Kungenxa yoko le nto e-Bezzia siyazi ukubaluleka kokwenza izitya ezilula, ngaphandle kwexesha elininzi lokulungiselela, zilungele isidlo esihle. Yiyo loo nto kwi iindlela zokupheka ezilula Masibandakanye zonke ezo zitya zinokwenziwa ngexesha elifutshane kwaye zimnandi.
Siyakumema ukuba wazi ezi ndlela zokupheka kwaye ukwazi ukwenza isidlo esimnandi ngexesha elifutshane.
Uhombise iitapile ezigcadiweyo kunye neetamatato zecherry
Sizithanda njani ezi zitya ezisecaleni eBezzia ezinokukhapha nasiphi na isitya, zombini inyama okanye intlanzi, kunye nemifuno...
Ipere ekhawulezayo kunye ne-check cheese quiche
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze5 .
IiQuiches ngamaqebengwana anencasa enesiseko se-shortcrust pastry kunye nokuzaliswa ngeqanda kunye ne-crème fraîche ...
I-porridge ene-almond kunye nekhilimu yebhanana
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze7 .
Ngaba ufuna izimvo zokugqibezela isidlo sakho sakusasa? E-Bezzia sikholelwa ukuba isidudu kwaye ngakumbi ngakumbi esi sidudu sinokhilimu we ...
Amaqanda aqhekezayo kunye neetsheri
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze10 .
Amaqanda aqhekekileyo sisitya sendabuko ekhitshini lethu. Omnye wethu othanda ukonwabela konke ...
Ukulunywa kweetapile kunye ne-zucchini
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze11 .
Ukulunywa kweetapile kunye ne-zucchini esikumema ukuba uzilungiselele namhlanje kubonakala ngathi kukukhetha okuhle ...
Isidudu sesinamoni sethanga
por UMaria vazquez yenzayo 1 ngonyaka .
Ngaba ujonge isidlo sakusasa esahlukileyo ngempelaveki? Eli papa kunye nesinamon porridge lolunye uhlobo ...
Ubusuku be-oatmeal kunye ne-almond cream
Mhlawumbi awuzange ulive eli gama ngobusuku, kwaye akukho mfuneko! Ligama elihlala linxulunyaniswa ne ...
Isonka esheshayo ngaphandle kokuxova
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sizamile esi sonka sikhawulezayo ngaphandle kokuxova. Isonka esine-crumb efanelekileyo kakhulu ukuba siyitye ...
Amakhowa kunye netumato yetumato frittata
Kukho iiresiphi eziba likhadi lasendle ukulungiselela ukutya okulula kunye nesidlo sangokuhlwa. IFrittata yenye yezi ...
Ikhaphetshu kunye neapile cream
por UMaria vazquez yenzayo 2 iminyaka .
U-Okthobha lelinye lamaxesha onyaka esiwathandayo kwisixa esikhulu semifuno esisinikwa yigadi….
Yogurt ngepesika kunye neepistachios
Iyogathi enepesika kunye nepistachios esikunika yona namhlanje eBezzia inokuba sisidlo sakusasa esimnandi ngempelaveki ...